Kubuyekezwe Ikhaya Nge-Wraparound Porch, i-Wifi Eqinile!
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-The Simple Life Hospitality
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-The Simple Life Hospitality izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ikhaya Elivuselelwe Elibukekayo eGreen Lake; I-Wraparound Umpheme. I-Wifi eqinile!
Ikhaya elibanzi elinokukhanya okuningi kwemvelo nezibuyekezo ezicatshangelwayo ezifaka umpheme omkhulu ongaphandle kanye nekhishi elisha elinomuzwa omusha wendlu yasepulazini yesimanje. Lo mbhede ongu-3, ikhaya lokugezela le-1.5 litholakala ngqo ngaphesheya kweBig Green Lake. Yindawo efanelekile yeholide lakho lomndeni elilandelayo, impelasonto yamantombazane/abafana, indawo yokudlala igalofu, noma izinsuku ezinde echibini.
Umpheme ongaphambili omangalisayo ungahlalisa bonke abasebenzi bakho. Nethezeka, funda, dlala imidlalo, futhi ujabulele ukudla. Isitezi sokuqala sinegumbi lokuhlala elinethezekile, igumbi lokudlela elihle, nekhishi elivuselelwe kahle. Kukhona negumbi lokulala lendlovukazi kanye nokugeza okugcwele esitezi sokuqala futhi. Phezulu, uzothola igumbi lokuhlala/lemidlalo, elilungele izingane ukuthi zihlanganyele.
3 amakamelo okulala / 1.5 yokugezela
I-A/C (iyunithi yodonga ku-Master Bedroom kuphela futhi ayifinyeleli endlini yonke)
I-Wi-Fi eqinile ukuze isebenze ukude
Igumbi lokulala 1: Umbhede osayizi weNdlovukazi - isitezi esikhulu
Igumbi lokulala 2: Umbhede olingana nenkosi - phezulu
Igumbi lokulala 3: Imibhede engu-2 enosayizi ogcwele - phezulu
Ikhishi lifakwe umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, ifriji, isitofu, ihhavini, i-toaster, kanye nomakhi wekhofi ovamile.
Kufakwe nezitsha, amabhodwe namapani, nezitsha
Umgodi womlilo ozosetshenziswa izivakashi (Izinkuni azinikeziwe)
Umpheme omkhulu onefenisha ye-patio
Igrill yegesi endaweni
Ibanga elihambayo ukuya edolobheni
Ikhaya liwuhambo olusheshayo nje oluya esigcawini sedolobha, izindawo zokudlela zasendaweni, nezitolo.
Isikebhe sethulwa ngaphansi kwamamayela ayi-1/2
Ibhishi lomphakathi elingaphansi kwemayela elingu-1
I-Lawsonia Golf Course engaphansi kwamamayela angu-3
Indawo ingaphesheya kweBig Green Lake, futhi ungaqasha isikebhe sephontoon ngaphesheya komgwaqo ukusuka ku-Bayview Motel. Ungachitha usuku echibini, vele ugxume uhambe! Uma uneyakho, ukwethulwa kwesikebhe kungaphansi kwekhilomitha elilodwa (indawo ayinayo idokodo layo). Kukhona igalofu elihle eduze, elinenkundla yegalofu ewine umklomelo i-Lawsonia engaphansi kwamamayela amathathu. Izindlela ezinhle zokuhamba ngebhayisikili nezintaba kuyo yonke indawo. Nokudoba okumangalisayo ku-Big Green Lake okunemihlahlandlela etholakalayo ukuze uqashwe. Ibhishi Lomphakathi elihle nelibanzi elingaphansi kwemayela kude. I-Oshkosh iqhele ngamamayela angu-24, ikhaya le-EAA kanye neminye imicimbi eminingi nemikhosi.
Kuhlinzekwa amalineni ombhede, imicamelo, izingubo zokulala, namathawula okugeza. Sicela uphathe amathawula akho olwandle.
Sihlinzeka nge-starter pack yezinto ezibalulekile ezihlanganisa lokhu okulandelayo: Imiqulu emi-2 yephepha lasendlini yangasese igumbi ngalinye lokugezela, imiqulu emi-2 yamathawula ephepha, insipho yezitsha, insipho yomshini wokuwasha izitsha, insipho yesandla kanye nezikhwama zikadoti ezingu-2-3.
Siphinde sihlinzeke ngeshampoo yosayizi wokuvakasha owodwa, i-conditioner kanye nokugeza umzimba endaweni yokugezela ngayinye egcwele.
Ngenxa yezinkombandlela zezempilo nezokuphepha zonke izinto zokuphakela kufanele zisuswe phakathi kwezivakashi. Sicela ulethe izinto ezibalulekile ongazidinga njengamafutha okupheka/isifutho, usawoti, upelepele nezinye izinongo, ushukela, njll.
Ibungazwe ngu-The Simple Life Hospitality
UThe Simple Life Hospitality Ungumbungazi ovelele